अस्पताल आउने कोरोना सङ्क्रमित दर घट्दै – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. अस्पताल आउने कोरोना सङ्क्रमित दर घट्दै – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
अस्पताल आउने कोरोना सङ्क्रमित दर घट्दै
बाग्लुङ्ग ।। बाग्लुङ्ग जिल्लामा महिना दिनअघि धवलागिरि अस्पतालको अवस्था अ’त्यासपूर्ण थियो । कोरोना सङ्क्रमितले भरिभराउ आइसोलेशन शय्या । अक्सिजनको चरम अ’भाव । ‘आइसीयू’मा ग’म्भीर बिरामीको चाप । दैनिकजसो सङ्क्रमितको मृ’त्यु ।
अस्पतालको दृश्य देख्दा लाग्थ्यो जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था भ’यावहउन्मुख छ । अहिले स्थितिमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ । सङ्क्रमणपछि अस्पताल आउनेको सङ्ख्या घटेको छ । ग’म्भीर बिरामी पनि कम छन् । “पछिल्लो एक सातायता अस्पतालमा आधा सङ्क्रमित घटेका छन्”, प्रमुख चिकित्सक शैलेन्द्र विक पोखरेलले भन्नुभयो, “दैनिक ३५÷४० जनासम्मलाई आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्नुपथ्र्यो, अहिलेको सङ्ख्या १५÷२० को हा’रीहारी छ ।”
बुधबार भने जम्मा १३ सङ्क्रमित अस्पतालमा उपचाररत छन् । तीमध्ये ‘आइसीयू’मा दुई जना छन् । ग’म्भीर बिरामी घटेपछि उक्त कक्षमा पनि चाप कम छ । तीन ‘आइसीयू’ शय्या अहिले खाली छन् । “वैशाख अन्तिमदेखि जेठ दोस्रो सातासम्म क’ठिन अ’वस्था झेल्यौँ”, प्रमुख चिकित्सक पोखरेलले भन्नुभयो, “अहिले केही सहज छ, सङ्क्रमण र मृ’त्युदर पनि घट्दो क्रममा छ ।”
रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय नअपनाउने र जनसाधारणले पनि स्वास्थ्य मापद’ण्ड पालना नगर्ने हो भने पुनः सङ्क्रमण बढ्न गई अवस्था बि’ग्रने उहाँको भनाइ छ । अस्पतालले सम्भावित तेस्रो सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय तयारीका कामलाई अघि बढाएको छ । बालबालिकाका लागि छुट्टै आइसोलेशनकक्ष बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारलगायत सरोकार भएका पक्षसँग समन्वय गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी राना मगरले बताउनुभयो । अस्पताललाई थप मानव संशाधन, चिकित्सा उपकरण÷सामग्रीसहित भौतिक संरचनाको खाँ’चो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
न्यून चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकका भरमा अस्पताल म’हामारीसँग स’ङ्घर्षरत छ । उपप्रादेशिक तहको अस्पताल भएर पनि स्रोत साधनको क’मी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरयता अक्सिजनको अ’भाव व्यहोरेको यस अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि प्रक्रिया थालिएको छ ।
सङ्घ सरकारको लगानीमा बन्ने प्लान्टका लागि बोलपत्र टुङ्गिइसकेकाले अब सम्झौता हुन मात्र बाँकी छ । डेढ सय जति अक्सिजन सिलिण्डर पनि जोहो गरिएको अध्यक्ष रानामगरले बताउनुभयो । आउने जुनसुकै अवस्थाका लागि अस्पताललाई तयारी हा’लतमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सङ्क्रमणको चक्र तो’ड्न अहिले गाउँगाउँमा एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ । जसका कारण परीक्षणको दा’यरा पनि बढेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या झण्डै एक हजार छ । नौ सय बढी सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा छन् । लक्षणले च्या’प्दै गएर स्वास्थ्यमा स’मस्या देखिएका सङ्क्रमित मात्र अस्पताल आउने गरेका छन् । अस्पताल आएकामध्ये पनि अधिकांश सामान्य उपचारबाट निको हुन्छन् । श्वासप्रश्वासमा सम’स्या आइ बिरामीको अवस्था ग’म्भीर बनेमा ‘आइसीयू’ र भेण्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिन्छ । हालसम्म यहाँका चार हजार बढीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यहाँ कोरोनाका कारण ४६ जनाले ज्या’न गुमाएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको June 10, 2021 88 Viewed